रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको अप्रिल 12, 2020
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल एलिलाइट प्रस्तुत गर्दछ जुन सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ "रूसी अरबपति"। हाम्रो रोमन एब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण विवरणको मिति सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन र उहाँका बारेमा धेरै बन्द र फुटबलका साना-साना तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको प्रिय चेल्सी फुटबल क्लबमा उनको पृष्ठभूमि मार्गदर्शक बलको बारे जान्दछन्। यद्यपि, केवल अलबामोविच जैवको बारेमा धेरै केहि चिन्ताजनक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम रोमन आर्केडिएविच अलबामोविच हो। अब्रामोविच, रूसको सेतोटोभमा अक्टोबर 24 को 1966th मा पैदा भएको थियो। उहाँ आफ्नो बुबा, आर्कडी अलबामोविचमा जन्मिएका थिए (एक राज्य कार्यालय प्रबन्धक) र उनको आमा, इरिना मिशिलेन्को (एक घरपरिवार).
यद्यपि अब्रामोविच जीवनका लागि सुरूवात सुरु भएको थियो किनकि उनी मध्य मध्यस्थ यहूदी परिवारको पृष्ठभूमिमा जन्मिएका थिए। तिनको बचपनको समयले उनको आमाको मृत्यु पछ्याउँदा ढोका खोल्यो जब उनी केवल 18 महिना पुरानो थियो। महिना पछि, अब्राममोभिचले आफ्नो पिता गुमाएका थिए, एक विकास जसले उनलाई3उमेरको उमेरमा अनाथ बनायो।
कुनै पनि बालबालिका दुवै आमाबाबुलाई गुमाएर बाँचेका छन् भने यो थाहा पाउन सक्छ। हिरोमोभिचका आमाबाबुको हानिमा हानिकारक मनोवैज्ञानिक नतिजा आए। प्रभावहरू स्पष्ट रूपमा उहाँले आफ्नो बचपन दिनको समयमा सहन आफ्नो विकासमा असर थियो।
सौभाग्यवश, उनको बुबा, लेब अलबोमोभिचको उत्थानको जिम्मेवारी ग्रहण गरे र उनलाई कोमी गणराज्यको एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर उखटामा लिए।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -शिक्षा
युवा अब्रामोविच उनको उमेर र पृष्ठभूमिको अधिकांश बच्चा जस्तै थियो, उखटाको पब्लिक स्कूलमा भर्ना गरिएको (तल चित्रित)। उनको साथीहरु को विपरीत, उनको एक बेजोड व्यवसाय थियो, एक विशेषता जसलाई उनलाई सहेजने देखि अर्जित धन र लाभ को महत्व को पहिचान गरे।
त्यसोभए, अट्टा टेक्नोलोजी कलेजमा आफ्नो शिक्षा बढाउने र त्यस पछि, मास्कोको प्रतिष्ठित गबिङ्क इन्टरनेसनल ओयल र ग्याँस बेच्ने बेलामा व्यवसायको संसारमा प्रवेश गर्नु अघि लामो समयसम्म पुग्न सकेन।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सैन्य सेवा
एब्रामोविचले 1974 मा अनिवार्य सैन्य सेवा सैन्य सेवाको लागि मस्यौदा गरे पछि अकादमिक खोजी समाप्त भयो।
प्रशिक्षण पाउँदा, अब्राममोभिचले सैन्य क्यारियरलाई पछ्याउन लायक छैन। बरु, उहाँले आफ्नो व्यापार प्रविधिहरूलाई अफिसका लागि पेट्रोलको अनधिकृत बिक्री निकालेर राम्रो प्रयोग गर्न लगाउनुभयो।
अधिनियमले उसलाई भविष्यको प्रयासको लागि बढि पैसा बढायो र बचत गर्यो। यसले अवैध योजनाहरूमध्ये पहिलो पटक पनि चिन्ह लगाइयो जुन पछि उनीहरूको भाग्यको लागि उत्प्रेरित हुनेछ।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पहिलो कम्पनी
जबकि अब्रामोविच धेरै अवैध योजनाहरु संग गुजारा हुन सक्छ हुन सक्छ, उनले धेरै राम्रो गरे कि उनको पहिलो कम्पनी को सुनिश्चित गर्न को लागि, Comfort Co-op (प्लास्टिक को खिलौने निर्माता) एक कानूनी आधार मा स्थापित भएको थियो।
उनको खिलौना कम्पनीको सफलताले उनलाई ओमके क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो तेल व्यवसाय सुरु गरी अन्य प्रयासहरूमा उद्यम गर्न उत्प्रेरित गर्यो।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
यो भनियो कि सफलता सफल हुन्छ जब तैयारी अवसर को पूरा गर्दछ, एक अधिकतम जो कि जब राम्रो तरिकाले खेल्यो मिखाइल गोरबकोभको (सोभियत यूनियन को पूर्व अध्यक्ष) 1980s मा निजीकरण को लागि दरवाजा खोला। एब्रामोविचले प्रायः आफ्नो व्यवसायलाई मुनाफाको कारणको लागि कानुनी बनाएर मौका पाएका थिए।
केही पछि, उनले बेरोजोस्स्की संग अनुग्रह पाए - एक व्यापारीले पहिले रूसी राष्ट्रपति बोरिस यल्ल्लिनको नजिकको लिङ्कको साथ पाए।
तिनीहरू दुवैले धेरै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय र राजनैतिक कार्यहरू गरे। Berezovsky संग Abramovich मित्रता लांचपैड प्रदान गरे कि उनलाई शक्तिशाली मान्छे संग भोजन, उनको क्रेमलिन भित्र एक अपार्टमेन्ट सुरक्षित र उनको व्यापार को लागि सक्षम छ कि तेल उत्पादनहरु देखि सुँगुरहरु र यहाँ सम्म कि गधाक्षक भर्ती को लागि सक्षम। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन र महँगो तलाक
अब्राममोभिच हो जसले विवाह सहित अरूसँगको सम्बन्धबाट व्यवसायिक लाभ उठाउँछ। उनले पहिलोपटक ओल्गासँग विवाह गरे। विवाहले उनको खिलौना कम्पनीको सफलताको सफलतामा योगदान पुर्याएको थियो किनभने एक्सएनएमक्सक्स रबल्सको उनको विवाह हालको स्टकको विस्तारमा रूसी अरबपतिले राम्रो प्रयोग गर्न सकेको थियो।
दुर्भाग्यवश, जोडे 1990 (उनको विवाह को तीन वर्ष पछि) मा तलाक भयो। अब्रामोविच अर्को सम्बन्ध लाभदायक साबित भएन। उहाँले भेट्नुभयो र एक एयर हस्टल, इरिनियामा विवाह गर्नुभयो (तल उहाँलाई चित्रित)।
पहिलो, सबैले एक समयको लागि राम्रो देखिन्छ जस्तो कि उनि एक 23 वर्षीय रूसी मोडेल, दशा Zhukova संग उनको कथित चासो को कारण तलाक भयो। तिनीहरूको महंगी विभाजन (£ 155million डलर) देखाए अब्राममोभिचले उनको5बच्चाहरु को साथ साथै सिडिंग हरिन्स को हिरासत गुमाए जसमा उनी युनाइटेड किंग्डममा आफ्नो पूर्व पत्नीको साथमा थिए। यसको अतिरिक्त, उनले तिनलाई उनको पूंजीको ठूलो मात्रा गुमाए। वास्तवमा, जीवन Nintendo छैन किनभने एक पटक सबै भाग्यमानी छैन।
तथापि, जस्तो देखिन्छ कि ओलिग्रार्चमा महँगो तलाकले नरम बनाएको छ किनकि उसले 2017 मा दशा झुकोवा (उनको दोस्रो विवाहको दुर्घटनाको लागी उत्तरदायी महिला) सँगको सम्बन्ध समाप्त भयो। $ 9B को मूल्यमा उनीहरूको विभाजनको मूल्य धेरैको अनुसार हो, ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो। तथापि, तिनीहरूको सम्बन्धले छोरा जन्मायो।
यस पोष्टको समयमा। अबामोविच अर्को रिश्ते को बारेमा केहि थाहा छ।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -राजनीतिक संलग्न
रूस मा शक्तिशाली पुरुषहरु संग अब्रामोविच को करीबी सम्बन्ध कारण थिएन। उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता जवान अलिग्रार्चमा उक्लियो जसले उनको भविष्यलाई चुकोटका स्वायत्त ओक्रुरु, रूसी फरेस्ट ईस्टमा एक अशुद्ध क्षेत्रको लागि प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिमा बनायो।
एक प्रतिनिधि को रूप मा सेवा गर्दै, अब्राममोइचले परिणाम चालित चलन को क्षेत्र मा गरीबी को कम गर्न को लागी, 2000 मा चुक्कोका को गवर्नर को रूप मा अन्य चीजहरु मध्ये एक पहल को रूप मा उनको चुनाव मा योगदान दिए।
उनले तथापि, इङ्गल्याण्डमा उनको प्रमुख अधिग्रहण चेल्सी एफसीमा ध्यान केन्द्रित गर्न 2008 मा गभर्नरको रूपमा इस्तीफा दिए।
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पुतिनसँग सम्बन्ध
अब्राममोभिच मूलतः सिफारिश गर्न पहिलो व्यक्ति थिए व्लादिमीर पुतिन त्यसपछि राष्ट्रपतिको उत्तराधिकारीको रुपमा, Boris Yeltsin। दुई जनाले पाएको पावर र यसको सम्बन्धित फाईलहरुमा कहिलेकाहीँ सामान्य जमीन पाएको छ।
डुओ यति धेरै नजिक थिए कि पुतिन थियो अम्बामोविचले 1999 मा कैबिनेट पदका लागि उम्मेदवारहरुलाई छोटो सूचीमा साक्षात्कार गरे, एक विकास जसले पुतिन मा अब्राहमोविचको प्रभावको बारेमा प्रश्न उठाए।
यस कुरामा बस्दै, उच्च अदालतको न्यायाधीश एलिजाबेथ ग्लोटर मा शासन गरे कि अब्रामोविच को पुतिन मा कम प्रभाव छ। उनको अनुसार
"त्यहाँ एक स्पष्ट आधार थियो कि श्री अलबामोविच हेरफेर गर्न वा अन्यथा प्रभाव, राष्ट्रपति पुतिन, वा आफ्नो प्रशासनका अफिसरहरू थिए, उनीहरूलाई आफ्नो शक्तिहरू प्रयोग गर्न श्री अलबामोविचले आफ्नो व्यापार प्राप्त गर्न सक्षम पारेको थियो। लक्ष्यहरू। "
रोमन अब्रामोविच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -चेल्सा खरीद
अब्राममोभिचले 2003 मा चेल्सी किनार गरे तापनि उनी अझै पनि चुक्कोका प्राचार्य थिए। उनको अनुसार, लन्डनमा बस्नु पर्ने पछि-दिवालिया क्लबको क्लब (उनको दोस्रो घर) बोरमबाट बचाइएको थियो तर धेरैले विश्वास गरेका थिए कि उनीहरूको गोपनीय स्वभाव थियो।
त्यसोभए चिलीले अलिग्राहीका हातमा चेल्सीलाई उद्धार गर्यो 15 मिनेटमा निष्कर्ष निकालेको थियो, केही समयपछि रोमन महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई रूसको स्थानीय लोकप्रियता मानियो।
अहिलेसम्म फास्ट फर्वार्ड क्लबमा रोमनको पृष्ठभूमि मार्गदर्शक बलले यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्लबमा परिणत गरेको छ। यसको अतिरिक्त, उनीहरूले ईमानदारीपूर्वक बोरबाट बचाउन पाएको जस्तो देखिन्छ जस्तो कि अन्य कारणहरूले उनलाई क्लब खरीद गर्न थाले।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद रोमन अब्रामोविच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
कुलीन फुटबल डायरी
शेख मन्सौर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Malcolm Glazer बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
सेन्सर तोसुन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
अलेक्जेन्डर Golovin बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
माइकल प्लैटिन बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अक्सिको कोकोरिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 9, २०२०
डेनिस Cheryshev बचपन कथा प्लस Untold जीवनी तथ्य